Izinto ezi-5 ezenza ipayipi elikhulu lekhishi
Ikhaya / Blog / Izinto ezi-5 ezenza ipayipi elikhulu lekhishi
2020 / 11 / 08 UkwahlukanisaBlog 4263 0
Kwabaningi, ikhishi akuyona indawo yokupheka kuphela. Eqinisweni, sisebenzisa amakhishi ethu ukukhumula, ukuxubana, ukucabanga. Amakhishi amanje ahlelwe ngokwengeziwe njengoba kudingeka ukuthi kubhekwe izivivinyo ezihlukile. Okwamanje ababopheli nje kuphela izinto esizidingayo ekuhlanganiseni nasekuwasheni okwamanje ngaphezu kwama-TV, ukugxila komculo, amashalofu, izimpahla ezenziwe ngezifiso nokunye okuningi. Amakhishi ajwayelekile, njengoba kunjalo nangezinto agqokiswe ngazo.
Kunoma ikuphi, kunento eyodwa cishe wonke amakhishi athuthukile anayo. Ihlala ikhona lapho, ithule futhi ayizikhukhumezi. Njengomthetho sikubukela phansi ukubakhona kwayo. Kodwa-ke ayikho ngempela enye into enethonya elikhulu kumvelo ejwayelekile yekhishi lethu.
Umpompi ophumelelayo njengokuthi wowowet kwenza ikhishi libukeke lingakholeki futhi lisebenze kahle. Sithanda ukuhlala isikhathi eside ekhishini elinje futhi sibuye kaningi. Noma-ke futhi, ngokungalindelekile, lapho umpompi uyinto edumazayo, asikwazi ukulithanda ikhishi kakhulu.
Ngenze ucwaningo online, ngabheka amamodeli adume kakhulu, ngafunda ukuboniswa kwento nokuhlolwa kwamakhasimende, ngathola izinto eziyisikhombisa ezenza umpompi ongavamile.
Umpompi wasekhishini ongajwayelekile unophawu
Ngiqinisile, angiqondi ukuthi kungani umuntu kufanele abheke ngisho nompompi ongamakiwe njengokukhetha. Ngabe abantu bacabanga ukuthi bayonga? Noma ngabe yikuphi, lokho akulona iqiniso. Impela zichitha kakhulu. Ompompi abangamakiwe babhubhisa maduzane. Bayaphula, bayaconsa, badedele, bachitha amanzi futhi bagcina abanikazi babo behlala futhi basebenzise okuhle.
Akusilo igama esilikhokhelayo kuphela. Ukuthembela, intuthuko entsha eyenziwe, ukwesekwa kwamakhasimende okulungiselelwe ukusiza uma kwenzeka singena ezindabeni, kuqinisekisa ukuthi ompompi abaningi bangukuphila konke. Songa amadola ambalwa bese ulahlekelwa yikho konke lokhu. Konke sekulungile?
Kunokukhethwa okubanzi kwemikhiqizo nabenzi abenza ompompi abanohlonze, abanekhono nabathembekile. Mane ukhethe eyodwa njengoba kukhonjisiwe ukunambitheka nezidingo zakho. Mane ukhumbule ukuthi i- “Made in China” akulona igama lomkhiqizo.
Ipayipi elijwayelekile lekhishi lihlela kahle ngaphakathi ekhishini
Zonke izinto ezicatshangwayo, ungabona ukuthi lo mbono uzodinga ukwehla kakhulu kumarundown. Ukuba wusizo nekhwalithi engazamazisi akuyona yini izidingo eziphakeme kakhulu? Ngempela, kunjalo. Noma kunjalo, ukuba nokwenzeka nokuthembeka njengamanje kuvame ngokwedlulele kompompi abavela kuyo yonke imikhiqizo ebhekwayo. Ngakho-ke ukumiswa kuthole into eyodwa ebaluleke kakhulu enquma isinqumo. Ukuqiniseka ngezinto ezahlukahlukene, manje singakhuthazelela ukubona ompompi ngamehlo athe xaxa futhi sinake kakhulu ukubukeka.
Izimo azipheli. Ngokubukeka okubucayi, noma kunjalo, amakilasi amahlanu angaqashelwa:
inhlanganisela yezimbili ezingenhla
Isakhiwo semishini esika onqenqemeni ingxenye enkulu siqukethe ubujamo obuyindilinga obuyindilinga noma obungenalutho noma obufanele. Izakhiwo ezikhuthazwa yimvelo zithatha izitshalo nezinto zemvelo. Ompompi abambalwa kakhulu, noma kungaba njani, bagqamise isitayela esingonakalisiwe. Njalo sihlangana nenhlanganisela yalabo ababili.
Oompompi beRetro baqhubeka ngokujwayelekile futhi basetshenziselwa amakhishi wesitayela sesikhathi ngenkathi abasunguli benikezwa imixube engalindelekile yemithombo, izingibe kanye neminye imikhuba enesibindi ne-frill. Bobabili badinga ikhishi lesitayela elihlobene futhi kuncane kakhulu kukho konke ukusetshenziswa okubandakanya kunamamodeli aqonde kakhulu.
Umpompi ompompi omangalisayo awunzima ukwethula nokusebenza
Ukusungulwa akufanele kuthathe imizuzu eyi-10 kumuntu onamakhono abalulekile e-DIY, okucekela phansi umpompi wakudala ongafakwanga. Empeleni, ukuthola amapayipi ngegebe kusinki noma onqenqemeni, ukunakekela isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu, ukunamathisela ngaphansi ngaphansi kokugoqa inathi (noma amantongomane) nokuxhuma izingxenye zezinto ezisendalini emanzini afudumele nabandayo . Akudlalwa njalo ngokulungiswa, ama-gaskets nokunwebeka nezinto eziqhathanisekayo kwazise izinhlangano okwamanje azinamanzi njengoba kubonakala kunjalo.
Isibambi siguqula izinga lokushisa nekhwalithi yokusakaza kalula futhi nakanjani. Kucatshangwa ukuxhumanisa ukusakazwa kuyo yonke indawo kulo lonke usinki nakudala.
Emiphethweni enekhanda le-splash elihlukanisiwe ipayipi liphuma ngaphandle kokuzikhandla. Akuthinti umzimba wompompi ngaphakathi futhi ngempumelelo kudlula kumumo owethulwe ku-spout. Inhloko ye-splash ixhuma kabusha ngesiqinisekiso, futhi ngeke kube khona ukuthambekela kwayo kukhululekile. Amanye amamodeli ompompi asebenzisa ngisho uzibuthe oqinile ukubamba ukusethwa kwekhanda le-splash.
Oompompi abadonsa phansi ngokuvamile basebenzisa isiphethu esibenza babuyele kumnikazi lapho bekhishiwe. Kumpompi okahle, ikhanda leshawa ngokuvamile lizobuyela kumnikazi ngaphandle kokuqondiswa ngumuntu.
Uhla lokujika lubanzi ngokwanele ukubeka iphungumangathi endaweni ethile oyidingayo.
Umpompi ompompi wasekhishini awukhiphi impilo yakho yonke
Ibhizinisi elinoshintsho lokuwasha kanye nama-gaskets linendawo nesikhathi esedlule. Amaphayiphu aqhubekile. Imibuthano ekhishwe kanzima, evikelwe kaningi ngamatshe ayigugu, yenza ompompi bazo zonke izinhloso nezinhloso kube nzima ukuwohloka. Abakhiphi konke empilweni yabo yonke, futhi isibambo siguqula izinga lokushisa nokusakaza ngokuqinile.
Umpompi wasekhishini ongajwayelekile unenkululeko evumela ukuthi izimbiza ezinkulu neziqukathi zingene ngaphansi kwawo
Uma ithuba lokuthi umpompi uphansi, akusho ukuthi kubi impela. Ngokuya ngobuningi besinki ungakakulungela ukubeka amabhodwe amakhulu kakhulu ngaphansi kwawo bese uwasha. Noma kunjalo, ngenxa yesimo esilinganiselwe sepayipi, kungadingeka ukuthi uyisuse endleleni yakho ngezikhathi ezithile. Akuyona into ebucayi, ngiyavuma. Noma kunjalo, njengoba njengamanje ulandela isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esingajwayelekile, kungahle kube lusizo ukuthola into enkulu yasekhishini ezogezwa ngaphansi kwale mpompi, futhi ulinganise ukuthi ijika lepayipi kufanele libe likhulu kangakanani ukukuvumela ithuba yentuthuko kunoma imuphi umcimbi, lapho ugeza lezo zinto ezinkulu.
Kunoma ikuphi, qaphela ukuthi ungenzi ihaba. Njengakuzo zonke izimo, okunengqondo kungumxhumanisi onesizotha futhi lapha. Uma nje wena, ngokwesibonelo, une-griddle eyodwa enkulu futhi izinto ezahlukahlukene zincane kakhulu, ukukhetha umpompi wosayizi wesitsha kungaba ukweqa okungadingekile.
Edlule :: Okufanele Ukwenze Lapho Uthenga Umpompi Wekhishi Olandelayo: Kungani i-Right Kitchen Faucet Yenza Umehluko
2021 / 01 / 15 762
Dizayina Igumbi Lokugeza Ekhaya Ukuze Lihle Futhi Libe Nesimo Esihle EShowe ...
2021 / 01 / 11 1172
Ungakwenza Kanjani Uma Umbukiso Uvinjelwe Futhi? Ungasheshi! Yisebenzisele Ukucwilisa… ...
2021 / 01 / 11 889
Izindlu Zokugeza Zingavuselelwa !!! Abantu Bokugeza Bazokwazi
2021 / 01 / 11 1009
Uxolo, indlu yangasese inalezi zinkinga, hhayi izinkinga zekhwalithi!
2020 / 12 / 12 4280
Ngemuva kokubona Idizayini Yesinki Yesibili Ekhaya Lomunye Umuntu, Ngaba Nomona!
2020 / 12 / 12 3613